मेघाका श्रीमान मिडियामा, हात काटिएपछि किन छोडे मेघालाई ? भयो पर्दाफास…(हेनुहोस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > मेघाका श्रीमान मिडियामा, हात काटिएपछि किन छोडे मेघालाई ? भयो पर्दाफास…(हेनुहोस् भिडियो)
मेघाका श्रीमान मिडियामा, हात काटिएपछि किन छोडे मेघालाई ? भयो पर्दाफास…(हेनुहोस् भिडियो)
admin February 6, 2019 February 6, 2019 समाचार	0
काठमाडौं -कृष्ण जस्तै करेन्टबाट पीडित बनेकी बिराटनगरकी २२ वर्षीया मेघा घिमिरे युट्युब मार्फत सहयोगको अपिल गर्दै काठमाडौँ आएकी छन्। नेपाल आर्मी बनेर देशको सेवा गर्ने मेघाको सपना करेन्ट हात गुमेपछि चकनाचुर बनेको छ। बिराटनगरी मेघा घिमिरे अहिले उपचारको लागि काठमाण्डौमा आइपुगेकी छन् । उनी करेन्ट लागेर दुबै हाट गुमेपछि थप उपचारको लागि काठमाण्डौ आइपुगेकी हुन् । बिराटनमै रहेको घरमा आज भन्दा ३ बर्ष अगाडी मेघालाई करेन्ट लागेको थियो । अहिले भने उनि आफ्नी आमाको साहारामा उपचारको लागि काठमाण्डौ आइपुगेकी हुन् ।
उनले आफ्नो उपचारको लागि धेरै ठाँउबाट सहयोग आउन थालेको पनि बताएकी छन् । ‘म उपचारको लागि काठमाण्डौ आएकी हु’ उनले भनिन् । ‘अहिले भने सामाजिक सञ्जालबाट मेरो अवस्थाको बारेमा थाहा पाएर धेरैले सहयोग गर्न थालेका छन् ।’श्रीमान बिकास कार्कीले भने करेन्ट लागेर दुबै हात काटिएपछि मेघालाई छोडिदिएका छन् । ‘पहिला धेरै माया गर्थे’ उनले भनिन्, ‘अहिले टाढा भएका छन् ।’ हात जोडिएको अवस्थामा आफ्नो जिविको पार्जनको लागि आँफैले संघर्ष गर्ने उनले बताएकी छन् । भिडियो हेर्न यहा क्लिक गर्नुहोस
जीवनमा पहिलोपटक बाघ देखेसँगै बाघसँग २ मिनेट भएको त्यो लडाइँ, यसरी भएको थियो घम्साघम्सी (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
अमेरिकामा आमाबुबासँग झगडा गरी १ महिनादेखि बेपत्ता भएका नेपाली युवा यस्तो अवस्थामा मृत भेटिए – पुरा हेर्नुहोस
दिनदिनै छोरीहरु बलात्कार भइरहँदा कुन खुशीयालीमा १८ करोडको गाडी चढ्न मन लाग्यो राष्ट्रपतिज्यु ?
मलामी गएका एकै गाउँका ३१ जनामा कोरोना पुष्टि